Mmụta na Ọsọ nke Nkà na |zụ | Martech Zone
N'abalị ikpeazụ m nyere ohere ịgwa ndị CIT 499 klas na IUPUI n'ihi na Dr. Thomas Ho. Ọ bụ klas a na-etinye aka na ya, nke ụmụ akwụkwọ ụfọdụ na-abanyebeghị ebe ọrụ ha, ụfọdụ nwere, na ụfọdụ ndị na-arụ ọrụ ugbu a na teknụzụ.
Mgbe m na-agwa ha okwu, naanị m kọọrọ m ahụmịhe m banyere otu azụmaahịa si amalite ịmalite (ma ọ bụ na-amanye ya ịnakwere) mgbasa ozi mgbasa ozi maka ịre ahịa. Ahịa a gụnyere ụdị njigide na nnweta. Ulo oru na acho igbanwe, mana anyi ma otu ulo oru ndi n’adighi agbanwe igbanwe.
A na-amanyekwa usoro agụmakwụkwọ anyị ịgbanwe. M na-akọrọ a ịrịba video na Amy Stark zitere m maka klas:
Enwere m olile anya na m hapụrụ klas na ụfọdụ ihe akọwapụtara nke ọma.
Maka ndị gụsịrị akwụkwọ na CIT na-abanye na Akụrụngwa, nke a bụ oge dị ịtụnanya anyị bi - ebee Mgbakọ ike na-akpụ akpụ site na ngwaike zụrụ ahịa gaa n'igwe ojii dịpụrụ adịpụ. Ọ na-agbanwe otu anyị si arụ ma na-eweta akụrụngwa, otu anyị si ebugharị ngwanrọ ahụ, yana otu anyị si amalite azụmaahịa ọhụrụ n'ịntanetị.M gwara ndị otu ahụ na ha kwesịrị ịgagharị na Indianapolis nke BlueLock nke ha iji gaa na nnabata Bochum gburugburu ebe obibi yana Lifeline's Eastgate Mall ịga leta ọdịnihu nke datafarming.
Maka ndị gụsịrị akwụkwọ na CIT na-abanye na ngwanrọ, Sọftụwia dị ka Ọrụ bụ naanị ọdịnihu. Thedị ochie nke iwulite ma tinye sọftụwia na mgbasa ozi ezighi ezi, dị oke ọnụ, na enweghị ikike a na-akparaghị ókè nke SaaS na-eme. Ọtụtụ mmadụ ka na-akwado ụdị ochie nke ntinye ngwanrọ - M ga-arụ ụka na azụmahịa nke SaaS bụ ihe atụ pụrụ iche nke na-enye ohere azụmaahịa iji kwado ngwa ngwa, na-aba uru n'oge na-adịghị anya, ma na-aga n'ihu na-eme ka ahụmịhe onye ọrụ jiri obere ego.
Maka nwa akwụkwọ kọleji ọ bụla, enweghị m ike imesi ike njikwa aha ezu. Atingkụziri ụmụ akwụkwọ anyị banyere iwulite aha ntanetị - ma ọ bụ site na iwu ụlọ na itinye ha na webụ, ịde blọgụ banyere ha, isonye netwọkụ mmekọrịta, na isonye ọkachamara netwọkụ iji bido ịzụlite mmekọrịta ọkachamara bụcha usoro achọrọ iji pụta na kọleji ma banye n'ọrụ na-aga nke ọma. Echere m na anyị niile ga-ekwenye na, ka ọ dị ugbu a, ụbọchị nke mbanye ndị nnukwu ụlọ ọrụ ga-eme ka ị banye n'ụba. ọrụ agaala. Site na ntanetị ịntanetị ngwa ngwa, ịmalite ọnụnọ ọkachamara, ma bido izute ma kelee ndị ọkachamara mpaghara - ị nwere ike ị gbagbata ụfọdụ ọnụ ụzọ mepere emepe.
N'ihi Dr. Thomas Ho na CILT oche Stephen Hundley na IUPUI maka ohere ikesa ụmụ klas ahụ ihe m mụtara. Enweghị m ike ịsị zuru oke banyere etu ndị ọrụ na akụrụngwa dị na IUPUI si dị ịtụnanya - yana imeghere ha ndị ọchụnta ego mpaghara na ndị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi dịka m na-egosi etu ha siri rara onwe ha nye na agụmakwụkwọ na-agagharị ọsọ nke teknụzụ!
IUPUI nwekwara ebe puru iche n’ime obi m n’ihi na obu ebe nwa m nwoke n’aga akwukwo. Bill bụ nwa akwụkwọ na-asọpụrụ na IUPUI na Math na Physics, onye na-ahụ maka mgbakọ na mwepụ na Math na ọ na-amalite ịme ụfọdụ nyocha physics ebe ahụ. IUPUI abụrụla ụlọ ọrụ dị ịtụnanya - na-enye ma na-agba nwa m nwoke ume ịgbasa n'ime ohere ọhụụ na ịma aka kwa ụbọchị. Ọ na nso nso a họpụtara ndị ọrụ maka Barry Goldwater mmụta!
Tags: barry goldwater scholarshipcitEducationiupuiphysicsstephen onyekwerethomas homahadum